Fiaraha-miasa Feon’ny Filazantsara/ Lycée Nanisana – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juin 27, 2012 juillet 2, 2012 Laisser un commentaire sur Fiaraha-miasa Feon’ny Filazantsara/ Lycée Nanisana
‘Mahazoa fahendrena, mahazoa fahalalana’ (Ohabolana 4:5)
Araka ny fiaraha-miasa efa nisy, dia baolina kitra no nokasaina notanterahina talohan’ny fialan-tsasatry ny Paska. Taorian’ny dinidinika nataon’ny Feon’ny Filazantsara sy Mr Félix (volontaire FF eny an-toerana) dia tsapa fa ny loka no tena mahaliana ireo mpianatra handray anjara fa tsy tena ny hiroso bebe kokoa eo amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra. Koa ho fanatsarana ny asa fitaizana sy fanabeazana iarahan’ny roa tonta, dia tapaka fa haompana mivantana amin’ny fampandrosoana ny ara-panahy ny fiaraha-miasa. Ankoatry ny “ Cours Biblique par Correspondance” dia hisy programa isam-potoana handefasana horonan-tsarimihetsika, arahina fifaninanana Soratra Masina, eo anivon’ny Sekoly. Koa ny Alarobia 20 aprily no nanatontosana izany, ny horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohateny hoe “Ilay olon-tsy fantatra” no nalefa. Niisa 39 ireo mpianatra nandray anjara. Nisy karazany 2 ny fanontaniana dia : fanontaniana nikasika ny horonan-tsary sy fanontaniana mikasika ny vanin-andron’ny Paska.
Fananganan-tsaina Lycee Nanisana
Ireo mpifaninana 13 voalohany nahazo isa ambony indrindra no mahazo loka. Ny fanolorana ny loka dia notanterahina ny Alatsinainy 23 Aprily nandritra ny fananganan-tsaina, natrehin’ny mpandraharaha, mpampianatra ary ny mpianatra rehetra. Satria nanatrika izany avokoa ireo mpianatra ao amin’ny Sekoly, dia noararaotina ny nanentana ny rehetra hanatrika ny fifaninanana manaraka; nentanina koa ny rehetra mba hanaraka ny “Cours Biblique par Correspondance” mba hitomboan’ny tsirairay amin’ny fahalalana tsara ny Tenin’Andriamanita.
Ireo mpianatra nahazo loka
miaraka amin’ny Talen-tsekoly,
sy Atoa Felix (tee-shirt fotsy)
Famangiana sy fanentanana
Tsy nijanona teto amin’ny faritra manodidina an’Antananarivo izay misy ny Foiben-toeran’ny FF ny fitsidihana Fiangonana ataon’ny mpiasa eto amin’ny FF. Ny 26 May lasa teo, dia nitsidika sy nanao fanentanana tany amin’ny Tobim-pifohazana Makedonia (miankina amin’ny Tobilehibe Farihimena, sehatry ny FLM – Synodam-Paritany Avaratrimania), Ambatolampy Gara izy ireo. Nampahatsiahy ny fiaraha-misa efa nisy teo amin’ny Synoda (SPAM) sy ny FF izy ireo, ary nanentana momba ireo programan’asa maro samihafa azo haverina indray ny fanatanterahana azy, dia ny “Cours Biblique par Correspondance” izay omena maimaim-poana, ny Literatiora Kristiana, ny horonan-tsarimihetsika, ary ny Fampiofanana tandrify hoan’ny loholom-piangonana. Nisy fizarana trakitra sy prospectus tamin’ireo mpivory, ho fampahafantarana azy ireo bebe hatrany ny ireo sehatr’asa atolotry ny Feon’ny Filazantsara.
Pastora RAKOTONIAINA Zakaria, sady Raiamandrenin’ny Toby Makedonia
Publié parfilazantsaramada juin 27, 2012 juillet 2, 2012 Publié dansUncategorized